"43२ १", सेक्स ब्यारालका लागि लेखक पॉल अस्टरबाट नयाँ वर्तमान साहित्य
A43 २ १ », नयाँ पौलस्टर अस्टरबाट
हामी पहिले नै बाट नयाँ कुराको लागि उत्सुक छौं पल एस्टर, र यसले बाहिर आउनको लागि केहि समय लिइसकेको छ (हामी ती मानिसहरूका लागि जसले लेखकलाई अलि पछि पछ्याउँदछौं र प्रायः सबै पठनबाट आनन्द लिन्छौं), हामीसँग यो पहिले नै हामीसँग छ। कम्तिमा एउटा दुर्लभ शीर्षकको साथ: "43२ १", अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको छ सम्पादकीय Seix बैरल। अर्को, हामी तपाईंलाई यस किताबको बारेमा थोरै मात्र बताउँछौं र हामी तपाईंलाई छोटो अन्तर्वार्ता दिनेछौं जुन लेखक आफैले प्रकाशकका लागि दिएका थिए।
फर्ग्युसनको जीवनमा एक मात्र अपरिवर्तनीय तथ्य यो हो कि उहाँ मार्च,, १ 3। 1947 मा न्यु जर्सीको नेवार्कमा जन्मनुभएको थियो। त्यस क्षणदेखि, उहाँसामु विभिन्न बाटोहरू खुल्छन् र चारवटा बिभिन्न जीवनहरू बाँच्नको लागि नेतृत्व गर्दछन्, बढ्न र प्रेम, मित्रता, परिवार, कला, राजनीति र मृत्युसमेत विभिन्न तरिकामा अन्वेषण गर्न, केहि घटनाहरूको साथ। अमेरिकी बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धलाई पृष्ठभूमिको रूपमा चिह्न लगाइएको छ।
यदि तपाईले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण घडीमा बिभिन्न किसिमले व्यवहार गर्नुभएको भए के हुन्छ?4321, सात वर्ष मा पॉल अस्टरको पहिलो उपन्यास, एक सम्पूर्ण पुस्ता को एक चलती चित्र हो,aउमेर को आउँदै सार्वभौमिक र पारिवारिक गाथा जुन चम्काउने अवसरको सीमा र हाम्रो निर्णयहरूको परिणामहरूको अन्वेषण गर्दछ। किनभने सबै घटनाहरू, यद्यपि यो असंबद्ध देखिन्छ, केही सम्भावनाहरू खोल्छ र अरूलाई बन्द गर्दछ।
Seix ब्यारल को लागी साक्षात्कार
अन्तर्वार्ताकर्ता: आदर्श कसरी आयो?
पल अस्टर: मलाई वास्तवमा थाहा छैन। एक दिन म यहाँ मेरो घरमा थिएँ र कसैको जीवन कहानी भिन्नता, उनीहरूको समानांतर जीवनहरू लेख्ने विचारले मलाई हिर्कायो। यो उठ्यो। मलाई थाहा छैन किन र कसरी। म कहिले पनि पुस्तकको लागि कुनै विचारको मूल पत्ता लगाउन सक्षम भएन। एक क्षण त्यहाँ केहि छैन र अर्को मिनेट तपाई संग केही छ। जब म केहि पनि केहि पनि हुँदैन भनेर म त्यो क्षण पत्ता लगाउन सक्षम भएन। यो भर्खरै भयो। के म तपाईंलाई भन्न सक्दछु कि म त्यस विचारको बारे मा धेरै उत्साहित थिए, जुन यस्तो कुरा हो जसले मलाई धेरै दृढतापूर्वक समात्यो। मैले भन्नु पर्छ, मैले यो ज्वरोले लेखेको हो, यो नाच र कताई जस्तो लाग्यो, र त्यहाँ केहि प्रकारको जरुरी काम थियो जुन मैले गरिरहेकी छु त्यो असाधारण थियो।
अन्तर्वार्ताकर्ता: के तपाईंलाई त्यो दिन याद छ जुन तपाईंको जीवन परिवर्तन भएको थियो?
पल अस्टर: यो पुस्तक कुनै पनि हिसाबले आत्मकथाको पुस्तक होईन। तर उहाँ भित्र एक तथ्य छ जुन मलाई केहिसँग मेल खान्छ, व्यक्तिगत रूपमा जब म १ 14 बर्षको थिएँ। यो तब भयो जब म ग्रीष्म शिविरमा थिए र केटाहरूको समूह, लगभग बीस, वृद्धिमा वनमा गए र भयानक आँधीबेहरीमा फसे। र रेबाट टाढा जान चाहन्छौं, हामी खुला मैदानमा प्रवेश गर्यौं, क्लियरि।। यसलाई पहुँच गर्नका लागि, हामी चेन-लिंक फेंसको मुनि क्रल हुनुपर्‍यो। त्यसो भए हामी बार बारमा एक एक गरी फाईलमा गयौं। मेरो अगाडि एउटा केटा थियो, मेरो मतलब यति नजिक थियो कि उसको खुट्टा मेरो अनुहारबाट इन्च थियो। र त्यो बार अन्तर्गत पारित बेला, बिजुली, तत्काल उहाँलाई हत्या मारे। र मलाई लाग्छ कि यो मैले निर्धारण गरेको सबैभन्दा निर्णायक चीज हो। केटो तत्कालै मर्न हेर्नुहोस्। यो त्यस्तो चीज हो जुन मेरो सम्पूर्ण जीवनको लागि सताईएको छ। र यो पुस्तक, मलाई लाग्छ, त्यो अनुभवबाट आयो। त्यसैले यो मसँग १ something वर्षको उमेरदेखि लिएर आएको हुँ।
पल अस्टर: मेरो जीवनमा अन्य महत्वपूर्ण पलहरू पनि भएका छन्। मलाई लाग्छ कि मेरी श्रीमती, सिरी हस्वेटेडको खोज्ने दुर्घटना सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। र यो संयोगले पूर्ण रूपमा थियो। कहिलेकाँही मलाई लाग्छ यदि हामी त्यस्तो तरिकाले नभेदौं भने मलाई के हुन्छ। मेरो सम्पूर्ण जीवन कत्ति फरक हुन्थ्यो? यसद्वारा मेरो मतलब यो होइन कि मौकाले सबै चीजहरू चलाउँदछ। हामीसँग स्वतन्त्र इच्छा छ, हामीसँग निर्णय लिन निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छ। हाम्रो पनि दायित्व र पूरा गर्न आवश्यक छ। तर के हामी जहिले गर्छौं, जीवन के साथ इमानदार हुन, बुझ्न र स्वीकार गर्न को लागी हो कि अप्रत्याशित सधैं जीवन को कपडा को हिस्सा हो।
अन्तर्वार्ताकर्ता: जीवनको बारेमा उपन्यास।
पल अस्टर: यसैले मैले सोच्न थाले कि म यस प्रश्नमा किन ध्यान गर्दैछु, पुस्तकमा आत्मकथा के हो र के छैन। स्पष्ट रूपमा, तपाईंको कल्पनाबाट उत्पन्न हुने सबै कुरा तपाईंको आफ्नै अनुभवबाट प्रेरित छ। तर उदाहरणका लागि यदि तपाईको उपन्यासमा चरित्र छ जसले चुरोट पिउँदछ र तपाईले आफ्नो जीवनमा १०,००० सिगरेट पिउनुहुन्छ, त्यो आत्मकथा है कि छैन? र जे भए पनि कुराको चरस भनेको काल्पनिक हो। जब तपाईं उपन्यासमा तथाकथित "वास्तविक तथ्यहरू" राख्नुहुन्छ, तिनीहरू काल्पनिक हुन्छन्, तिनीहरू काल्पनिक अंश हुन्छन्। मलाई लाग्छ कि पुस्तक एक प्रकारको छाया आत्मकथाको रूपमा हेर्नु गलत व्याख्या हुनेछ। यो होइन। यो पटक्कै होइन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » A43 २ १ », नयाँ पौलस्टर अस्टरबाट
क्रिस्टल_को जंगल। जोन म्याक्लेन हास्य (र पद) हुन्छ।